एक spar के हो? यो वस्तु प्रत्येक सवारी साधनको मुख्य संरचनात्मक सदस्य हुनुहुन्छ। सबै अवस्थामा, कार को लम्बाइ भर स्थित spar कार - विशेष Jumpers र शामिल, यो निलम्बन, bodywork, आदि सबै विवरण बाह्य, डिजाइन, यो टुक्रा जो धेरै मोटर चालकहरुलाई यो कल किन सीढी, जस्तो संलग्न छन् जो एक फ्रेम खेल्छ .. सीढी। यस लेखमा हामी के spar थप विस्तार सिक्न र यसलाई अन्य वाहन घटक संग परस्पर कसरी छलफल हुनेछ।
कम्तिमा एक पटक यो संरचनात्मक तत्व सामना गर्न थियो जो हरेक चालक, उहाँले लामो जस्तो देखिन्छ के थाह धातु प्रोफाइल। अर्को शब्दमा, यो एक आयताकार क्रस-खण्ड एउटा साधारण स्टील पाइप छ।
मिति, त्यहाँ रूपरेखा spars दुई मुख्य प्रकार हो:
कार शरीर को सम्पूर्ण लम्बाइ विस्तार को विवरण।
दुई अलग संरचना, मेशिन को अगाडि र पछाडिको स्थित जुन।
प्रत्येक कार spar (आफ्नो फोटो तल हेर्न सक्नुहुन्छ) उच्च बल छ, र सवारी साधनको सञ्चालन भर यो भारी भार सामना गर्न सक्छन् - इन्जिन, यात्रु को वजन र ओसारपसार सामान (कार्गो व्यावसायिक वाहनहरु भने)। साथै, प्रत्येक समय पिट र अन्य अनियमितताहरु मा चलिरहेको, यो टुक्रा लोड पाङ्ग्रा सामना गर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईं समय समयमा स्थिति अनुगमन गर्नुपर्छ "Jumpers र साथ स्टील पाइप।"
सीढी spar संग सीढी फ्रेम भ्रममा छैन। पछिल्लो तत्व फ्रेम को एक भाग हो, तर यसको कार्य प्रतिस्थापन गर्दैन। फ्रेम aforesaid प्रकार सामान्यतया यू आकारको पक्ष सदस्यहरूसँग प्रदान गरिन्छ र सबै वाहन, ट्रक र एसयूवी स्थापित। तिनीहरूले यस्तो व्यावसायिक वाहनहरु रूपमा भार बोक्न छैन देखि यात्री कार, एक सीढी फ्रेम छैन। तर तिनीहरू सुसज्जित छन् (र अनिवार्य) spars, वा कार शरीर पिट पहिलो आगमन मा बाङ्गो थियो।
लोड र अन्य एकाइहरु बीचको सम्बन्ध
माथि वर्णन रूपमा, यो वस्तु आन्तरिक दहन इन्जिन बाट भारी भार र गति मा पाङ्ग्रा सामना गर्न सक्छन्। यो प्रत्येक पुन: लोड मा, कि, यसको संरचना परिवर्तन छ, असमान spar सम्पत्ति बिकृति छ भन्दा र चलिरहेको कि उल्लेख गर्नुपर्छ। र सक्रिय तत्व फ्रेम जस्तै महत्वपूर्ण विशेषताहरु कार्य भएकोले यसको विरूपण सबैभन्दा अप्रत्याशित नतिजा गर्न जान्छ। यो गरिब controllability, शरीर को सबै तत्व को असमान व्यवस्था हुन सक्छ र पनि निलम्बन ज्यामिति उल्लंघन। यी समस्याहरूको को सबै भन्दा, छ, मा भएको थियो गर्नेहरूलाई आफ्नो शरीर सबैभन्दा तनाव अनुभव गरेका छन् कि वाहनहरु मा उत्पन्न दुर्घटनामा। एक के हो दुर्घटनामा थियो जसले कार, मा spar? यो क्षतिग्रस्त भाग, आफ्नो निष्ठा गुमाए र जसबाट adversely कार मा अन्य तत्व असर गरेको छ जो। त्यसैले, जब एक कार कार ध्यान छैन राम्रो छ, दुर्घटनामा भएको थियो "एक / ख", पनि बाटो खरीद तिनीहरूले सही उपस्थिति छ।
त्यसैले हामी spar र यसको कार्य बुझ्न सिके। सफल यात्रा!
सर्वश्रेष्ठ Wiper जाडो: एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा। जाडो wiper ब्लेड: कार को चयन
गल्तीलाई VAZ-2110: कुनै स्पार्क। इंजेक्टर वाल्व 8: समस्या को सम्भव कारण
इतिहास र शेवरलेट HHR को विवरण
कसरी चरणमा एक मानव टाउको आकर्षित गर्न?
सुरुचिपूर्ण बैग डिसोना
को कौसी भन्दा canopies: एक सुरिलो मोहरा बनाउन
Acer Aspire 5536: एक नोटबुक को निर्दिष्टीकरण को समीक्षा
ख्रीष्टियन र परम्परा: सबै संन्यासी दिन
उपयोगी बगैचा सजावट - Berberis vulgaris